Wararka - soo-saarista iyo Codsiga Daaweynta ee Maskaxda Laryngeal
Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. waxaa la aasaasay bishii Ogosto 2005. Waxay ku taalaa Haiyan County, Jiaxing, China oo ah xarunta dhaqaale ahaan horumartay Yangtze River Delta waxayna u dhowdahay Shanghai, Hangzhou iyo Ningbo, iyo sidoo kale Zhapugang -Jiaxing-Suzhou Expressway, Hangzhou-Ningbo Expressway iyo Jiaxing South Station. Mawqifkeeda juqraafi ahaan way ka sarreeysaa, gaadiidkuna waa ku habboon yahay oo dhakhso badan yahay.
Waxay ka kooban tahay aag kudhowaad 20,000㎡with 11,200㎡ Workshop4,000㎡ fasal 100.000 qol nadiif ah iyo 300㎡ shaybaar. Qiyaasta shirkaddu way deggan tahay tobanka warshadood ee ugu sarreeya Bariga Shiinaha. Awoodda wax soosaarka iyo iibintuna waxay ahaayeen saddexda ugu sarreysa Shiinaha shan sano oo xiriir ah Badeecadaha ayaa maray ISO13485: 2016, shahaadada Yurub CE iyo FDA.
Hordhaca Maqaarka Laryngeal
Baaxadda arjiga: Marin-haweedka loo yaqaan 'Kangyuan's laryngeal mask airway' wuxuu ku habboon yahay hawo macmal ah oo loogu talagalay bukaannada u baahan suuxdinta guud iyo dib-u-kicinta xaaladaha degdegga ah, ama in la dhiso hawo-gacmeedyo aan dabiici ahayn oo muddo-gaaban ah oo loogu talagalay bukaannada kale ee u baahan inay neefsadaan. Waxqabadka: Marka la barbardhigo xalka xakamaynta maran, farqiga pH waa is1.5; sheyga waa nadiif, waxaa nadiifiyay ethylene oxide, hadhaaga ethylene oxide-na kama badna 10μg / g.
1. Maskaxda Laryngeal Maaskaro ee Hal-Tuubo ah oo loogu talagalay Isticmaal Keliya
100% silikoon heer caafimaad ah oo loogu talagalay isku-xirnaanshaha sare.
Naqshadaynta non-epiglottis-bar waxay siisaa marin fudud oo cad iyada oo loo marayo lumen.
5 sadarro xagal ah ayaa soo muuqda marka cabirku uu ku yaallo xaalad fidsan, taas oo ka fogaan karta suunka si uu u sharfo inta la gelinayo.
Weelka qoto dheer ee kafateerku wuxuu bixiyaa daboolid heer sare ah wuxuuna ka hortagaa xannibaadda ay keento epiglottis ptosis.
Daaweynta khaaska ah ee dusha sare ee cabbirka waxay yareyneysaa daadashada oo si wax ku ool ah u beddela.
Adiga oo aan isticmaalin laryngoscopy glottis, yaree dhacdooyinka cunaha oo xanuuna, bararka glottis iyo dhibaatooyinka kale.
Si fudud ayaa loo dhex gelin karaa, kaliya waxaad u baahan tahay 10 ilbidhiqsi si aad u xalliso dhibaatada neefsashada.
2. Tuubada Hal-Tuubo oo La Xoojiyay Maaskada Laryngeal
5 sadarro xagal ah ayaa soo muuqda marka cabbirka uu ku yaallo xaalad fidsan, kaas oo ka fogaan kara kabaha si uu u xumaado inta la gelinayo.
Kordhinta muquuninta ayaa yareyneysa burburka ama ilkaha.
360 ° foorarsiga, waxqabadka foorarsiga oo xoog leh, oo ku habboon hawo qaadashada inta lagu jiro qalliinka meelo kala duwan oo bukaan ah.
Tilmaamaha hagaha oo leh qaab qaabaysan ayaa loo xushay si loo fududeeyo gelinta LMA iyadoo loo eegayo qaabdhismeedka jirka iyo jirka ee afka iyo cunaha qofka.
3. Maskaxda Laryngeal Mask-Hal-Tube ah oo leh Hal Epiglottis Bar
Ka samaysan 100% silikoon heer caafimaad ah oo la soo dhoofiyey.
Shan xariijimood oo xagal ah ayaa soo muuqda marka cabbirka uu ku yaallo xaalad fidsan, taas oo ka fogaan karta in khafiifku uu u xumaado inta lagu jiro galinta. Laba--epiglottis-bar naqshadeynta weelka, ayaa ka hortagi kara xannibaadda ay keento epiglottis ptosis.
Daaweynta khaaska ah ee dusha sare ee cufnaanta ayaa yareynaya qulqulka oo si wax ku ool ah u wareegaya.
4. Maskaxda Laryngeal Mask-Hal-Tube-Hal-tubbo leh Bar Epiglottis
5. Labo-tuubbo la xoojiyay Maaskada Laryngeal
Waxaa jira laba dhuumaha hawo qaadashada iyo dheecaanka gogosha, kuwaas oo iswaafajiyay kuna xirmay hawo mareenka bini'aadamka iyo hunguriga, taas oo si weyn u yareynaysa dhacdooyinka soo noqoshada iyo himilada, isla mar ahaantaasna fududeyneysa meeleynta iyo meeleynta maaskarada caarada.
Tuubbada dheecaanka caloosha ee madaxa bannaan waxay gacanta iyo si xunba u nuugi kartaa waxa ku jira caloosha si looga fogaado khatarta soo noqoshada.
Kabax la buufin karo oo la balaariyay, wuxuu xoojiyaa xiritaanka cunaha, wuxuu fulin karaa hawo qaadasho wanaagsan waqti dheer, wuxuuna balaarin karaa adeegsiga LMA.
Daboolka isku dhafan ee isku dhafan ayaa loo isticmaali karaa sida ilig ilig, oo si sahlan loo hagaajin karo, kaliya wuxuu u baahan yahay cajalad si loo xalliyo dhibaatada hagaajinta.
4. Madaxa bukaanku waxyar ayuu dib u soo laabtay, suulka bidix ee bukaanka afkiisa iyo jarista daanka bukaanka, si loo ballaariyo farqiga u dhexeeya afafka.
5. Adoo adeegsanaya gacanta midig si aad u qabato qalinka haya maaskaro-mareenka, si loo helo, farta farta iyo farta dhexe oo ka soo horjeedda jirka isku xirka daboolka iyo maaskaro qaadista tuubada hawo qaadashada, afka ku daboolo jihada dhinaca dhexe ee daanka hoose, carrabka ku dhejinaya hooska 'LMA pharyngeal LMA', illaa iyo inta uusan sii socon ilaa hadda. Sidoo kale way isticmaali kartaa habka gadaal u gelinta maaskarada cunaha, kaliya ku daboolo afka dhinaca sare, waxaa afka la saari doonaa ilaa hunguriga salka hoose ee maaskaro caarada, iyo 180 ° wareegga ka dib, ka dibna sii wad inaad hoos u riixdid lafta lafta maaskaro, illaa iyo hadda ma riixi karo. Markaad isticmaaleyso maaskarada laastikada la xoojiyay ama ProSeal oo leh usha hagaha. Usha hagaha ayaa lagu ridi karaa daloolka hawada si ay u gaarto booska loogu talagalay, gelinta maaskarada caarada waa la soo bixin karaa ka dib marka la geliyo maaskarada hawada.
7. Iyadoo la raacayo qiimaha magacaaban ee lagu daboolayo boorsada ka buuxsantay gaaska (qadarka hawadu kama badnaan karo calaamadda buuxinta ee ugu badan), isku xir wareegga neefsashada oo qiimee in hawo wanaagsan, sida hawo qaadista ama xannibaadda, ay tahay inay waafaqsan tahay tallaabooyinka dib u gelinta ee maaskaro laf-dhabarta.
2. Bukaanka qaba barar xiiqan, barar ba'an oo ku dhaca mareenka neefsashada, iyo xiiqda dillaaca.
3. Cudurka cunaha wuxuu keenaa xannibaadda marin-haweedka, u-hoggaansanaanta sambabka, ama caabbinta hawo-mareenka sare, dadka u baahan hawo-qaadista cadaadiska wanaagsan.
4. Bukaannada neef mareenkooda la cadaadiyo oo la jilciyo oo ay marin hawo mareenka suuxdinta ka dib.
5. Kuwa xasaasiyadda ku leh alaabta wax soo saarka.
6. Bukaannada ay tixgeliyaan rugaha caafimaadku inay ku habboon yihiin badeecadan.
Dhaqanka caafimaadka ee maaskaro laryngeal-tuubbo laba-tuubbo ah:
Qaababka gaadiidku waa inay ahaadaan kuwo nadiif ah oo nadiif ah, halka dabka laga helana waa in la go'doomiyo. Alaabooyinka waa in lagu keydiyaa qoyaan aan ka badnayn 80%, heer kulku kama badna 40 darajo Celsius, gaasaska wax daxaya iyo qolka hawo nadiifinta oo wanaagsan. Iska ilaali iftiinka qoraxda ee tooska ah, waana mamnuuc in lagu wada keydiyo walxaha sunta ah iyo kuwa halista ah.